पानी कम पिउनुहुन्छ ? त्यसो भए यो पढ्नुहोस ! « गोर्खाली खबर डटकम
पानी कम पिउनुहुन्छ ? त्यसो भए यो पढ्नुहोस !
किड्नी अर्थात मृगौला शरीरको निक्कै महत्वपूर्ण अंग मध्ये एक हो । यसले शरीरमा रगत सफा गर्ने देखि, हार्मोन बनाउने, खनिज सोक्ने, मुत्र उत्पादन गर्ने, टक्सिन अर्थात खराव पदार्थहरुलाई शरीरबाट निकाल्ने तथा एसिडको सन्तुलन बनाउने जस्ता काम गर्छ ।